Rakotomanga Eric : “Mihamanatona hatrany ny fipoahan’ny krizy” | NewsMada
Rakotomanga Eric : “Mihamanatona hatrany ny fipoahan’ny krizy”
“Marina izay fomba fijery izay tamin’iny filankevitry ny governemanta farany iny. Milaza izany fa vao mainka hamafisina ny fandraisana fepetra henjana, araka ny filazany azy, amin’izay heverina fa hoe hanakorontana sy hanao fihetsiketsehana.”
Io ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny AKFM, Rakotomanga Eric, momba ny hoe fandraisana fepetra hentitra amin’ireo mpanome baiko sy mpitarika korontana eto amin’ny firenena tamin’ny filankevitry ny governemanta farany teo.
Miakatra ihany izany ny maripana eo amin’ny fanjakana andaniny; ankilany, ny vahoaka. Satria efa tsy mitovy hevitra intsony. “Manamarika izany fa mihamanatona hatrany amin’ny fipoahan’ny krizy ihany ny toe-draharaham-pirenena amin’izao”, hoy izy.
Efa fomban’ny fiafaran’ny fitondrana izao
Efa fomban’ny toe-draharaham-pirenena ihany izay. Raha jerena amin’ny fihetsiketsehana taloha nataon’ny vahoaka, tsy maintsy mandalo amin’izay ambaratonga izay koa. Manambara ny ho fiafaran’ny fitondrana izay, araka ny fanazavany. Rehefa hery toy izao no ampiasainy manoloana ny fitakiam-bahoaka: na ahoana na ahoana, tsy maintsy hisy fipoahana ihany izany.
Resaka mandeha an-gazety ny mety hisian’ny fanovana mpikamban’ny governemanta, maromaro vitsivitsy. Mety ho amin’izany ireo voakasiky ny “Raharaha Razaimamonjy Claudine”. Tsy zava-dehibe izay, fa mazava izao: manomboka tsy marin-toerana intsony ny governemanta. Etsy andaniny, mihenjana amin’izay mitady hihetsika.
Tsy vahaolana intsony ny fanovana olona
“Na inona fiovana hataony eo, na Praiminisitra na minisitra io: efa ilay fitondrana mihitsy no tsy mandeha intsony”, hoy ihany izy. Ny tsy mampandeha azy, ny politika itondrana ny raharaha: tsy natao ho an’ny vahoaka maro anisa, fa ho an’ny mpandraharaha akaiky sy namanamana fotsiny. Tratra aoriana loatra… Efa ela ny vahoaka no nitaky fanovana ifotony, fa tsy olona.